गिरीजा बाबू, अझै जान्न पाऊं अरु कहां कहां हजुर् गिर्नु भएको छ।
गिरीजा बाबू, अझै जान्न पाऊं अरु कहां कहां हजुर् गि...
के को डर?
"(गिरीजा), तँ यस्तै यस्तै काम गर्छस, माफियाहरु हुन यिनीहरु हत्या गरिदिन्छन्।"
माथिको वाक्य बीपीले गिरिजाबाबूलाई भन्नु भएछ। सन्दर्भ-खर्चको जोहो गर्न बम्बैबाट एउटा तस्करको सुन् आफ्नो सुरक्षा कवच् प्रयोग गरी सुरक्षीत साथ बाहिर निकाल्न खोज्दा बीपीले गिरीजालाई हप्काउंदै भन्नु भएको भनेर वहांको आत्म ब्रितान्तमा उल्लेख भएको छ। ( नेपाल् सप्ताहिक्)।
मलाई यो पढ्दा अचम्म लागेर आयो। जो मान्छे यो देशको सर्ब शक्तिमान् ब्यक्ति छ, प्रधानमन्त्री मात्रै होइन, राष्ट्र प्रमुख नै छ, उनको बिगत भने जालि नोट र सुनका तस्करीका कथाहरुले भरिएको छ।
राजनैतीक नेताहरुको खर्चपर्च नै ब्यापारीहरुको चन्दा सहयोगबाट भएको बुझिएको हो। तर अभाव भयो भन्दैमा जाली नोटका कारोबारीहरुसंग फंसेर, आफैं जाली नोट छाप्ने कार्यमा संलग्न हुनु लाजलाग्दो कुरो भएन? र यसमा बीपी जस्ता नेता समेत संलग्न भएको देख्दा त झनै अचम्म लाग्दो कुरो छ।
बीपीले खटाएर दिएको खर्चले पुर्याउन नसक्ने र ट्रेनमा तेस्रो दर्जाको यात्रा गर्न नसक्ने भएको ले गिरीजा बाबू यस्तै यस्तै उपद्रो खालको आम्दानीको स्रोत् खोज्दै हिंड्नुहुंदो रहेछ। हुंदा हुंदा तस्करको सुन् सुरक्षीत् साथ बम्बैबाट बाहिर निकाल्ने "क्यारीयर्" समेत बन्न खोज्नु भएछ।
जो नेताको बिगत यस्ता तस्करीसंगको सम्बन्धले जेलिएको छ, बर्तमान् पनि त्यस्तै नहोला कसरी भन्ने? अहिले को अंक सम्ममा गिरीजा बाबूले त्यो काम् गलत थियो भनेर भन्नु भएको छैन।
सीताराम् प्रसाई जस्ताहरु प्रहरीको रेकर्डमा फरार हुन्छन् तर गिरीजाबाबुको नातेदार भएकाले निर्धक्क हिंडडुल् गर्न सक्छन्। खुम् बहादुर्, गच्छदार, चिरन्जीबि वाग्ले, गोविन्द राज जोशी जस्ताहरु अझै पार्टीका नेताका रुपमा स्थापित छन र उनीहरु नै चर्का प्रजातंत्रबादी बनेर माओबादी संग बन्दै गरेको सहमतीमा ब्यबधान् खडा गर्ने उद्धेश्यले कोहोहोलो मच्चाउंछन्।
जाली नोट, सुन तस्करहरु संगको संबन्ध, बिमान अपहरण जस्ता इतिहास भएका पार्टी र नेताहरुले कुन् मुखले माओबादीका चन्दा संकलन, अपहरण जस्ता कार्यहरु को आलोचना गर्ने?
डेढ-दुई बर्ष पहिले भैरबनाथ गणका एक् क्याप्टेनले दरबारमार्ग का एक् प्रहरी नीरिक्षक् सहित् दुई प्रहरीहरुलाई अपहरण गरी चरम यातना दिए। गिरिजाले ठाडो आदेश् दिएर ती क्याप्टेन लाई बर्खास्त गरियो। फेरी तिनै गिरीजाको आदेशमा ति क्याप्टेनको पुनर्बहाली भएछ।
यस्ता धेरै उदाहरणहरु छन्-धेरै अपराध छन, जहाँ हाम्रो देशको महान प्रजातन्त्रबादी पार्टीका नेताहरु संलग्न छन।
Posted by: Postak_Shrestha Labels: अभिव्यक्ति
तपाईले लेख्‍नु भएको छ "मलाई यो पढ्दा अचम्म लागेर आयो"
तर मालाई भने अचम्म लागेन अहिलेको नेपालको स्थितिलाई एक चोटी ध्यान दिएर हेरेमा थाहा हुन्छ करिव करिव "Criminal history" नभएका कोहि पनि माथी पुगेका छैनन् ।
मलाई त लाग्छ शायद बीपीको साथ नभएको भए वा भनौं बीपीको चिन्तन 'सफल' नभएको भए हाम्रा अहिलेका राष्ट्र प्रमुखले त्यहि पेशालाई नै निरन्तरता दिन्थे की!।
यौटा धोति र लट्ठिको भरमा पुरै भारतलाई हाक्ने क्षमाता भएका गान्धिको देशमा बसेर तेस्रो दर्जाको रेलमा यात्रा गर्न नसक्ने "महामानव" को यहि र यस्ता अन्य करतूतको फेरहिस्त शायद माओबादी संग पनि हुनुपर्छ, त्यसैले त वहाँ माओबादी सबै कुकृत्यको बिरोध गर्न सक्नु हुदैन।
January 2, 2008 at 8:54 PM
गिरीजाको कहानी धेरै छन, सुनको कहानी त सुनेको थिइन तर प्लेन कान्डको हाकीम चाही गिरिजा नै हुन। खास कुरो त के हो तर प्लेन हाइज्याक भएपछि कोइराला परिबारमा बहार आएको थियो भनेर एक थरी असन्तुष्ट समुह भन्ने गर्छन। गिरिजामा केहि त हुनु पर्छ नत्र प्रचन्ड पनि किन थर्कमान हुन्थे ?
January 3, 2008 at 10:09 PM
ती घट्नाहरु सत्य होला नै। आन्दोलन अनि क्रान्तिको लागि हो कि ब्यक्तिगत प्रयोजनको लागि? स्पष्ट भएन। लाल क्रान्तिको नाममा मान्छेको टाउको काट्दै हिड्नु कहाँ सम्म जायाज हो ? सी पी देखि ओलि सम्म ले मान्छे मारेको स्विकारेका छन्। माओबादीको कुकर्म त हाम्रो सामु छंदै छ। के अब ती सबै कामरेडहरु हत्यारा भए त?। निर्धा र निर्दोषको अस्मिता लुट्नु भन्दा त यो ठीक भएन र? यसको अर्थ यो होइन कि त्यो काम जायज थियो। मात्र भन्न खोजेको कुरा यस्तै घट्नाहरु अरुले नि घटाए होलान्, तिनको मुल्यान्कन कसरी गर्नु हुन्छ?
बिपीले खटाएर दिएको खर्चले नपुग्ने, रेलमा तेस्रो दर्जामा यात्रा गर्न नसकिने भने पछी त कुरा स्पष्ट भैहाल्यो नि-पैसो ब्यक्तिगत वा क्रान्ति प्रयोजनको लागि थियो भनेर। फेरि क्रान्तिको नाममा हुने जुनसुकै अपराधलाई छुट दिने हो भने त माओबादीलाई पनि सफाइ दिए भैहाल्यो नि।
इटालीमा माफियाको सुरुवात पनि क्रान्तीकै लागि भएको थियो। भारतको चम्बलघाटीमा डांकु बन्ने हरु पनि अन्याय् अत्याचार र गरिबी सहन नसकेर नै डांकु बन्ने गर्थे। यस्ता अपराधीक गतिबिधि सीपी, केपी, जीपी, जो कसै बाट पनि हुनुहुन्न। तर के गर्ने, यहाँ सबको इतिहास अपराधले भरिएको छ र सोही कारणले न हो, मल्लिक आयोग, रायामाझी आयोग सबैको रीपोर्टलाई धोती लगाइएको।
January 4, 2008 at 1:11 PM